Uhlelo Lokufudumeza Ukususwa Kwamapayipi we-RPR
Kusebenza Kanjani Ukwehliswa Kwe-Induction?
Ukukhishwa kwe-induction Inqubo elungiselela ukushisa ebusweni.I-generator ye-induction ithumela okushintshayo kwamanje ngokusebenzisa ikhoyili yokungeniswa, ekhiqiza insimu ye-electromagnetic. Le nsimu iheha imisinga eguqulwa ibe ukushisa lapho ixhumana nezinto zokuqhuba ezifana nensimbi. Ukushisa kwenziwa ngaphansi kwengubo, okwenza ingubo ikhule ngokushesha. Le ndlela ilungele ukwelapha indawo eyisicaba noma egobile endaweni yomsebenzi futhi ayidingi ukuvalelwa.
Uhlelo lokuhlubula lokungeniswa luzohluba upende, okunye ukumbozwa, ukugqwala okusindayo, ukubola kwebhaktheriya kanye namafutha kanye namafutha ahambisa amandla kagesi (insimbi ye-ferromagnetic) ephula ukubopha kokuhlangana phakathi kwento kanye nezinsalela ze-substrate etch.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi uhlelo lokususa upende lokungeniswa, Ukususwa Kwamapayipi Wokungenisa, Ukususwa Kwokumbozwa Kwamapayipi, Uhlelo Lokukhipha Amapayipi, RPR, Ukususwa kokumbozwa kwe-RPR, Uhlelo lokukhipha i-RPR, Ukungeniswa kwe-RPR, Ukususwa kopende we-RPR, Ukususwa kwepayipi le-RPR, Ukususwa kokumbozwa kwepayipi le-RPR, Ukususwa kokugqwala kwe-RPR Imeyili kwemikhumbi